Waxa lagu arko Córdoba - 7 goobo soo jiidasho leh oo ay tahay inaad booqato | Safarka Absolut
icon La abuuray Sketch.
Maxaa lagu arkaa Córdoba
Susana godoy | | Espana
Haddii aan ka fikirno Andalusia, waxaan ognahay inaan haysanno magaalooyin iyo geedo fara badan oo aan booqano. Laakiin maanta, waxaan joojin doonnaa midkood oo ku yaal sagxadda Sierra Morena. Córdoba waa magaalada seddexaad ee leh dadka ugu badan ee Andalusia. Dhexdeeda waxaad ka heli kartaa dhaxal weyn waqtiyadii kale. Maanta waxaan kuu sheegeynaa waxa laga arki karo Córdoba iyo 7-da geesood ee daruuriga ah.
Sidii aan si fiican u soo sheegnay, waa magaalo la ogaado oo waqti badan leh. Markasta oo aan dhex galno, waxay inagu dhex mari doontaa taariikh gaar ah iyo taariikh hore oo hal-abuurku ka buuxo. halkaas oo ay ku dhasheen falsafadleydii iyo abwaannadii waaweynaa waqtiga. Baro safarkayaga weyn maanta!
1 Maxaa lagu arkaa Córdoba, Masaajidka
2 Alcazar ee Boqortooyadii Masiixiyiinta
3 Buundada Roman
4 Barxadaha Cordovan
5 Qubeyska Caliphal
6 Fagaaraha Tendillas
7 Masiixa laambadayaasha
Maxaa lagu arkaa Córdoba, Masaajidka
Shaki la'aan, mid ka mid ah joogsiyada ugu horreeya waa Masaajidka Cordoba. Goobta Dhaxalka Adduunka laga soo bilaabo 1984-kii waxaanan wajahaynaa mid ka mid ah taallooyinka ugu muhiimsan. Marka lagu daro quruxdeeda soo jiidashada leh oo ka kooban in ka badan 1000 tiirar, mid waa inuu sidoo kale dib ugu noqdaa qiimaha taariikhiga ah. Dhismuhu wuxuu bilaabmay 785.
In kastoo markii dambe dhowr jeer la ballaariyay. Sidan oo kale waxay noqotay tan labaad ee adduunka ugu weyn. Sababahan oo dhan awgood, waa mid ka mid ah booqashooyinka waajibka ah ee ay tahay in mar lagu sameeyo magaalada. Laga bilaabo 8:00 subaxnimo ilaa 9:30 subaxnimo, marka laga reebo ciidaha ama Axadaha, waxaad leedahay marin bilaash ah. Waxaa laga yaabaa inaadan haysan waqti aad wax badan ku aragto, laakiin qayb ka mid ah. Meel laga soo galo, maalmaha iyo saacadaha intiisa kale waa 10 euro oo loogu talagalay dadka waaweyn iyo shan carruur ah.
Alcazar ee Boqortooyadii Masiixiyiinta
Qalcad iyo qasri ku kulma gudaha gidaarada waaweyn. Halkan labada Roman iyo Visigoth labaduba way wada nool yihiin, laakiin sidoo kale waxaa jira burushyo asal ahaan ka soo jeeda Carabta. Markii Fernando III El Santo uu qabsado Córdoba, dhismuhu wuu burbursanaa. Ma noqon doonto ilaa Alfonso X El Sabio oo kubilaabanaya dib u soo celinteeda. ka Alcazar ee Boqortooyadii Masiixiyiinta dhowr jeer ayey adeegsatay. Mid ka mid ahi waa kii jeelka ku jiray qarnigii XNUMXaad
Shaki la'aan, waa aag lagu raaxeysto. Waxaa ku soo jiidan doona afarta munaaradood ee xukuma qalcaddan. Waxay kugu soo dhaweyn doonaan barxadaha dabiiciga oo buuxa, ee noo kaxeeya marinnada iyo qolalka kala duwan halkaas oo aan ku arki karno domes Gothic ka samaysan dhagax. Waa xiran yahay Isniinta, laakiin maalmaha intiisa kale waad booqan kartaa laga bilaabo subaxa hore ilaa 15:00 galabnimo. Dadka waaweyn waxay bixin doonaan 4,50 euro.
Meelaha kale ee booqashooyinka ugu badani yihiin Buundada Roman ee Córdoba. Haddii aad ka yaaban tahay waxa lagu arko Córdoba, horeyba waad u ogayd inay tahay mid kale oo ka badan joogsiga lagu taliyay. Waa buundo ku taal wabiga Guadalquivir. Waxaa loo yaqaan «Old Bridge», laga yaabee sababtoo ah dhowr qarniyo ayay ahayd mida kaliya ee magaaladan ku taal. Waa qeyb ka mid ah xarunta taariikhiga ah ee magaalada waxaana dib loo habeeyay sanadkii 2008.
In kastoo haddii aan dib ugu laabanno dhismihiisa, waa inaan ka hadalnaa SI dc Waxay leedahay wadar ahaan 331 mitir iyo 16 qaansoleyda. In kasta oo la yidhi qaabkeedii hore, mid kale ayay lahaan lahayd. Xiiso ahaan waxaan dhihi karnaa taas sanadkii 2014 muuqaalo ka mid ah Game of Thrones ayaa lagu duubay buundadan. Waxaa loo arki karaa xilli shanaad oo taxane ah.
Dalxiisayaasha, Cordovan Patios ayaa xiiso gaar ah leh. Dabcan, ma ahan wax ka yar. Magaalo tan oo kale ah ayaa soo noolaatay iyada oo ay ugu mahadcelinayaan dheryaha leh dhir midabyo leh oo lagu dhejiyay barxadaha. Markaa inta lagu jiro usbuuca labaad iyo saddexaad ee Maajo, wicitaanka waa la xusaa Cordovan Patios Festival.
Dhexdeeda waxaa jira kaqeybgalayaal dhowr ah oo si bilaash ah u muujiya barxadooda qurxoon. Dabcan, haddii aadan tagi karin bisha Maajo, maahan inaad seegto inaad ku raaxeysato quruxdan. Marka waad aadi kartaa Palacio de Viana oo aad ku raaxeysan kartaa, maadaama ay leedahay 12 barxadood iyo beer weyn. Dabcan, xusuusnow in meeshani xiran tahay Isniinta.
Sannadkii 1903, Qubeysyadan Khaliifada waxaa lagu helay si kedis ah. Waxay ku dhegeen Umayyad Alcazar oo la waayey. Waxaa loo maleynayaa inay ahaayeen qubeyska ugu muhiimsan magaalada oo dhan iyo dabcan, waa mid kale oo ka mid ah kuwa soo jiidashada leh markii aan la yaabanno waxa laga arki karo Córdoba. Waxaa lagu qabtay khilafadii Alhakén II.
Gudaha gudahiisa, waxaan ka helnay dhowr qol dhammaantoodna si fiican ayey u xiran yihiin oo waxaa weheliya qasnado. Waxay sidoo kale qayb ka yihiin xarunta taariikhiga ah ee Córdoba oo laga bilaabo 2006 waxaa loo furay dadweynaha guud. Haddii aad booqato meeshan, waa inaad bixisaa 2.50 euro waxaadna mari doontaa aagga soo dhawaynta, iyo sidoo kale qolka fadhiga ama jardiinada.
Inta udhaxeysa Baths, Matxafyada, Alcazar ama Masaajidka, sidoo kale way fiicantahay in la sameeyo joogsi ka duwan. Waxay ku saabsan tahay Fagaaraha Tendillas. Waxay aad ugu dhowdahay shirkii Roomaaniga qadiimiga ahaa waana barta ugu weyn ee ganacsiga ee Córdoba. Ku dhowaad midowga waxa loogu yeero Calle Gondomar, waan heli doonnaa saacadda fagaaraha. Midkani wuxuu si faahfaahsan u sheegayaa inuusan dhab ahaantii garaacinin xilliyada, laakiin saacadaha iyo sidoo kale rubucyada, wuxuu ku heesaa laxan guitar.
Dhib malahan inaad diin badantahay ama kayartahay, maxaa yeelay geeskaan ayaa jaceyl kuguqaadi doona. Sawirqaade Juan Navarro León wuxuu abuuray 1794. Waxay ku taalaa Fagaaraha Capuchin. Shaki la'aan, meel kale oo ku habboon in lagu raaxeysto habeenkii. Tan iyo markaas waxay noqon doontaa marka siddeed faynuus oo ku wareegsan la iftiimiyo. Meeshani waxay abuurtay dhowr aayadood, oo uu ku jiro kii uu sameeyay Antonio Molina.
Markii aan isweydiineyno waxa laga arko Córdoba, marwalba waxaa jiri doona geesaha kale iyo meelaha ka muhiimsan daruuriga. In kasta oo aan uga tagnay kuwaan shaki la'aan, iyaguna way badan yihiin. Miyaad horeba u booqatay iyaga?
Wadada buuxda ee maqaalka: Safarka Absolut » Maxaa lagu arkaa Córdoba
Maxaa lagu arkaa Bern, caasimada Switzerland
Xulo meel aad rabto Albacete Alemania Amsterdam Andorra Argentina Atenas Australia Austria Avila Badajoz Badalona Barcelona Benidorm Brasil Burgos Cádiz Canada Islands Canary Karibiyaanka Castellon Shiinaha Ciudad Real Colombia Córdoba Corea Croacia Cuba Basin Denmark USA Masar Elche Espana Filipinas Francia Gijón Granada Greece Guadalajara Holland Hijmans Huelva Hungary Ibiza Hindiya England fekradeed Italia Japan Sherry León Lisboa London Madrid Mallorca Ku waasi Morocco Menorca Merida Mexico Miami Milan Murcia Norwey New York Orense kuwa kale Oviedo Paris Peru Portugal Prague Jamhuuriyadda Dominican Roma la fahmay Salamanca Suecia Switzerland Tenerife Toledo Uruguay Venezuela Vitoria
Xulo halka loo socdo
Soo raraya ....